12:43 PM အဖြူရောင်နတ်သမီး 21 comments
ဧပြီလမှာ မွေးခဲ့တဲ့ “ပိတောက်ဖူး”ဆိုတဲ့ ကျမရယ်...သင်္ကြန်မှာ ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့ သံယောဇဉ်အရှိဆုံး“သူနက်ရောင်”ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဒဏ္ဍာရီမဟုတ်ခဲ့တဲ့ ဒဏ္ဍာရီလေးတပုဒ်...ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ ...
တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေးမို့ မိဘများ၏ မေတ္တာ၊အကြင်နာများအားလုံးကို ပိုင်စိုးထားသူ ပိတောက်ဖူးကို..“ဧပြီလ”မှာမွေးခဲ့သည်မို့လားမသိ၊ သူမ သင်္ကြန်ကိုချစ်သည်၊ ပိတောက်ကိုမြတ်နိုးသည်၊ ဖြူသောအဝတ်တန်ဆာ၊ အဝါနုရောင်(သို့မဟုတ်) အရောင်နုနုလေးများကိုရွေး၍ဝတ်ဆင်တတ်သူ၊ လူချစ်လူခင်ပေါသလောက် တစ်ယောက်ထဲနေတတ်သောသူမ ၊ သူမစိုက်ပျိုးထားသော စံပ္ပါယ်ပင်များကြားတွင် အမြဲတန်းလိုလိုအလုပ်ရှုပ်နေတတ်သည်။
ပိတောက်ဖူးမှာလည်း သူနက်ရောင် ပြောသမျှကို ယုံကြည်တတ်သူဖြစ်သည်၊ ယုတ်အစွဆုံး သူနက်ယောင်မှ လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းထွင်၍ ပြောလျှင်လည်း ပိတောက်ဖူး ယုံသည်။
အချိန်တိုင်းလိုလို လမ်းထဲတွင်ရှိနေတတ်သော သူနက်ရောင်မှာ ပိတောက်ဖူး၏ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို သိနေတတ်သည်၊ ပိတောက်ဖူး၏ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှ ရွယ်တူ ယောက်ျားလေးများနှင့် သူနက်ရောင်ပေါင်းပြီး ပိတောက်ဖူး၏ လှုပ်ရှားမှုများကို မျက်ချေမပြတ်စောင့်ကြည့်တတ်သည်။
သူတို့နှစ်ဦး ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပုံမှာ “ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့”တွင် သူနက်ရောင်နှင့် ပိတောက်ဖူးတို့ သူငယ်ချင်းများအား April Fool လိုက်လုပ်ရင်း သူနက်ရောင်မှ ကောက်ခါ ငင်ခါ “သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို ကြေငြာပါမယ်...အားလုံးနားထောင်ကြပါ...ကျနော် သူနက်ရောင်နဲ့ ပိတောက်ဖူးတို့ ဒီနေ့မှ “စ”၍ ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပါပြီ” ဟု ထအော်ရာမှ ရှင်းမရတော့ပဲ သူငယ်ချင်းအဖြစ်မှ ချစ်သူအဆင့်သို့ ကူးပြောင်းခဲ့လေတော့သည်။
ဧပြီလရဲ့သင်္ကြန်ရာသီနေ့လေးများသို့ရောက်တိုင်း....ပိတောက်ဖူးတို့ လမ်းထိပ်တွင် နှစ်စဉ် မဏ္ဍပ်ထိုး၍ လမ်းထဲမှ လူငယ်များ ရေပက်ကြသည်၊မုန့်လုပ်စားကြသည်။
အဲဒီနေ့တွေမှာ “ မြူမှောင်ဝေခင်း” သီချင်းကို သူနက်ရောင်မှ သီဆိုပြီး ပိတောက်ဖူး၏ အကတို့မှာ ထိုမဏ္ဍပ်၏ ပင်တိုင် သင်္ကြန်မောင်မယ်များအဖြစ် နေရာယူလျှက်ရှိသည်၊ ပန်းကြိုက်သော်လည်း ပန်းမပန်တတ်သော ပိတောက်ဖူးမှာ သူနက်ရောင်ကပေးသော ပိတောက်ပန်းများကိုမူ သူမ၏ ရှည်လျှားသောဆံကေသာတွင် ပန်ဆင်ထားတတ်သည်။..“တနှစ်တွင် တကြိမ်သာပွင့်သော ပိတောက်ပန်းများကဲ့သို့”.“သူမ၏ ဆံကေသာတွင် ပန်းပန်ခြင်း”မှာလည်း (၁)နှစ်တွင် တစ်ကြိမ်သာ မြင်တွေ့နိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ကံကြမ္မာဆိုတာ ကြိုပြီးသိမြင်နိုင်ခွင့်ရှိရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလည်းနော်....ဧပြီလရဲ့ ပထမဦးဆုံးနေ့လေး မှာပေါ့...သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ပြောပြချက်အရ..“သူနက်ရောင် ကို သပြေညိုနဲ့ ဆေးခန်းတခုမှာတွေ့လိုက်တယ်”..တဲ့.....
သင်္ကြန်နေ့ရက်သို့ တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနီးလာလေပြီ၊ ထုံးစံအတိုင်း လမ်းထဲမှ လူငယ်များ အကတိုက်ခြင်း၊ သီချင်းတိုက်ခြင်း တို့ဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေသော အချိန်တွင် ပိတောက်ဖူး၏ ဖခင်မှာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးရွားလာသဖြင့် ဆေးရုံသို့ အရေးပေါ်တင်လိုက်ရသည်၊ ပိတောက်ဖူးသည်လည်း ဖခင်၏ ဘေးတွင်သာ အချိန်ပြည့်နေပေးရင်း သူနက်ရောင်နှင့် ခနတာ ဝေးကွာခဲ့ရသည်။ သင်္ကြန်ရက်၏ အကြတ်ရက်တွင်တော့ ပိတောက်ဖူး၏ ဖခင်မှာ ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ခဲ့သည်၊ “အသုဘကို နှစ်သစ်မကူးရ” ဟူသည့် ရှေးအယူကြောင့် ဖခင်၏ ဇာပနကို နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့မတိုင်ခင် အပြီး သဂြိုလ်ပြီး ရက်လည်ခဲ့ရသည်။ သင်္ကြန်ရက်များပြီးဆုံးသွားခဲ့သော်လည်း ပိတောက်ဖူး တစ်ယောက်မှာ ဖခင်ဆေးရုံပေါ်တွင်ရှိခဲ့စဉ်က စိုးရိမ်စိတ်များဖြင့် နေ့မအိပ်၊ ညမအိပ် ပြုစုပေးခဲ့သော ပင်ပမ်းမှုများကြောင့် အပြင်းဖျားသည်၊ ပိတောက်ဖူးအား လူမမာလာကြည့်ကြသော သူငယ်ချင်းများထံမှ သူနက်ရောင်နှင့် သပြေညိုတို့၏ သင်္ကြန်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော သတင်းများကို ကြားသိရသည်။
ပိတောက်ဖူး နေကောင်းစပြုချိန်တွင် သူနက်ရောင်နှင့်တွေ့ရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ခရီးသွားသည်ဟု အကြောင်းပြကာ ကိုယ်ရောင်ဖျောက်နေခဲ့သည်။ တစ်နေ့ ပိတောက်ဖူးတစ်ယောက် မြို့ထဲသို့ ကိစ္စတစ်ခုနှင့်အသွား ၊ သူနက်ရောင် နှင့် သပြေညို တို့နှစ်ယောက်ကို ယှဉ်တွဲလျှက် တွေ့လိုက်ရသည်။ ဒီတခါတော့ အမြင်မှားစရာ မဟုတ်၊ ပိတောက်ဖူး၏ မျက်စိနှင့် တွေ့မြင်ခြင်းဖြစ်သည်၊ မြိုသိပ်မထားနိုင်တော့သည့် ပိတောက်ဖူးတယောက်..သူတို့နှစ်ဦးရှေ့သို့ ပိတ်ဆို့ရပ်လိုက်ပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်သည်၊။
သပြေညို ၏ အဖြေကြောင့် ပိတောက်ဖူး၏ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ လေဟာနယ်ထဲသို့လွင့် စင်ထွက်သွားသလိုခံစားရင်း သူနက်ရောင်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ခေါင်းငုံးထားသည်...ပိတောက်ဖူး၏ မျက်ဝန်းအိမ်မှမျက်ရည်များ လိမ့်ဆင်းမကျလာခင် သူတို့နှစ်ဦး၏ ရှေ့မှ အမြန်လှည့်ထွက်ခဲ့သည်။
ပြီးသွားပြီ....“ပိတောက်ဖူး”ဆိုတဲ့ ကျမနဲ့ “သူနက်ရောင်” ဆိုတဲ့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ချစ်ခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူနှစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းဟာ ဒီလောက်နဲ့ပဲ အဆုံးသတ်လိုက်ရတော့မှာလား...
ဒါဆိုရင် ကျမဖေဖေ ရဲ့နာရေးကိစ္စနဲ့ သင်္ကြန်ရာသီတွင်းမှာ အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တုန်းက “မြူမှောင်ဝေခင်း” သီချင်းကို သူနက်ရောင်က ဆိုပြီး သပြေညိုက က တယ်” ဆိုတဲ့သတင်း..။
“သူနက်ရောင်ရဲ့ လက်ထဲက ပိတောက်ပန်းကို သပြေညိုက ဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်တယ်” ဆိုတဲ့သတင်း..။ “သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ထဲမှာ သူနက်ရောင် အရက်မူးလွန်သွားတယ်၊ သပြေညိုက ပြုစုတယ်၊ ”ဆိုတဲ့သတင်း။
သင်္ကြန်နောက်ဆုံးနေ့မှာ သူနက်ရောင်နဲ့ သပြေညိုတို့ ပျောက်ဆုံးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်း”...တွေဟာ အမှန်တွေပဲပေါ့....အင်းလေ..အခုတော့ ငါယုံလိုက်ပါပြီ...ဒါဟာ ငါတို့နောက်ပြောင် ဆော့ကစားနေကျဖြစ်တဲ့ “ဧပရယ်ဖူး” နေ့မှမဟုတ်တာပဲ..။
“ပိတောက်လေး...သင်္ကြန်မှာ ပိတောက်မရှိရင် မဖြစ်သလို..ငါ့ဘဝမှာ နင်မရှိလို့မဖြစ်ဘူး”..တဲ့လား..။
“ဧပြီလမှာမွေးခဲ့တဲ့ နင့်ကို ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှာ ချစ်ရေးဆိုခဲ့သလို....ငါတို့လက်ထပ်ရင်လည်း ဧပြီလမှာ လက်ထပ်ကြမယ်နော်”...တဲ့လား...။
“မြူမှောင်ဝေခင်း” သီချင်းလေးကို နင်မဆိုတော့ပေမယ့်လည်း ငါကြားနေရတယ်...
ဒါပေမယ့် ငါ မ“က”တော့ဘူး...နင့်ဘေးမှာ “က”ရမယ့်သူက ငါမှမဟုတ်တော့တာပဲ.....
သင်္ကြန်မှာဝေနေတဲ့ ပိတောက်တွေကို ငါမကြည့်ပဲ မြင်နေရတယ်...
သင်္ကြန်မှာ ပျော်ရွှင်ကြသူတွေ...သင်္ကြန်မှာ ဝမ်းနည်းကြေကွဲကြသူတွေ....
သင်္ကြန်မှာ မွေးဖွားလာကြသူတွေ....သင်္ကြန်မှာ သေဆုံးသွားကြသူတွေ.....ကြားမှာ...
နင်နဲ့ဝေးရာကို ငါထွက်သွားခဲ့တာ အခုဆိုရင် (၁၀)နှစ်ကျော်တောင်ကြာခဲ့ပြီပဲ..။“သင်္ကြန်”ဆိုတဲ့ အိပ်မက်ဆိုးကြီးနဲ့လည်းဝေးခဲ့ရပြီ၊ သင်္ကြန်ကာလမှာ နင်နဲ့အတူစားခဲ့ဖူးတဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ်၊ မုန့်လက်ဆောင်းနဲ့ သင်္ကြန်ထမင်းတွေအစား ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုပ်၊ ခေါက်ဆွဲပြုတ်နဲ့ ဟမ်ဘာကာတွေကို ငါစားတတ်နေပြီ..။
ဒါပေမဲ့ ငါသိပ်မြတ်နိုးတဲ့ မြန်မာဝတ်စုံကိုတော့ အခုထိတိုင်စွဲမြဲစွာ ဝတ်ဆင်နေတုန်းပါပဲ..။
“မြူမှောင်ဝေခင်း” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို တမလွန်ဘဝကနေ နင်သီဆိုနေအုံးမှာလား..။
ဖွေးဖွေးဖြူနေတဲ့ စံပ္ပါယ်ပန်းလေးတွေကို ငါ ငုံ့နမ်းလိုက်တယ်....စံပ္ပါယ်ပန်းနံ့သင်းသင်းလေးအစား ပိတောက်ပန်းနံ့တွေ ငါ့နှာခေါင်းထဲကိုပြေးဝင် လာကြတယ်..။
ဧပြီလမှာ မွေးခဲ့တဲ့ “ပိတောက်ဖူး”ဆိုတဲ့ ကျမရယ်...သင်္ကြန်မှာ ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့ “သူနက်ရောင်”ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဒဏ္ဍာရီမဟုတ်ခဲ့တဲ့ ဒဏ္ဍာရီလေးတပုဒ်...ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ ...“သင်္ကြန်”ကိုစောင့်ကြပ်တဲ့ သင်္ကြန်ဝိဥာဉ်တွေကလွဲလို့ ဘယ်သူတွေက ပိုသိနိုင်အုံးမှာလဲ...။
ဇတ်လမ်းလေး က ၀မ်းနည်းစရာကောင်းလိုက်တား((( ... အဲ့လို သစ္စာမရှိတဲ့ ယောက်ကျားတွေကို မုန်းပါတယ်။
ဒီလို သစ္စာ မဲ့တဲ့ယောင်္ကျား မျိုး နဲ့လွဲ ခဲ့ တာ ပဲ ခပ်ကောင်းကောင်းးပါ
နတ်သမီးရဲ့အလွမ်းသင်္ကြန် ဇာတ်လမ်း က ကိုယ်တွေ့လား ဟင် ။ ဟင့်.. . သနားပါတယ်..
ဘာတွေက လူတွေကို ဒီလိုမျိုး ပြောင်းလဲ စေတာလဲ. . .ခဏတာ သာယာမှုလား။
နားတော့ မလည်ဘူး. . .ဝေဝေဝါးဝါး နဲ့ပဲ. . .
သစ္စာမဲ့သူနဲ့ ပတ်သက်ခဲ့ရတဲ့ ဒဏ္ဍာရီကို ဒဏ္ဍာရီထဲမှာပဲ ထားခဲ့ပါတော့ လို့ ပိတောက်ဖူးကို ပြောချင်ပါတယ်..
သစ္စာမရှိ ကတိမတည်တဲ့ သူတွေကို မုန်းမိတယ်..
ဒါကြောင့်လဲ သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကို ခံသွားရတာဘဲ..
ဒီလိုမိန်းခလေးတွေလဲ လောက မှာ အမြားအပြားရှိသလို
သစ္စာမရှိသူတွေလဲ ပေါမှပေါ ပါဘဲနော်..
ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာ သစ္စာတရားက အဓိကပါ သူငယ်ချင်းရယ်...
ဖတ်လို့ကောင်းတယ်...။ သစ္စာမဲ့တဲ့ ယောကျာင်္းနဲ့ ကွေကွင်းခဲ့ရတဲ့ အတွက် ၀မ်းနည်းစရာမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်...။ သင်္ကြန်အတွက် အလွမ်းပို့စ်လေးဖြစ်သွားတယ်..။
ဟူး ... ဇာတ်လမ်းလေးက အသက်ဝင်လိုက်တာ...
သစ္စာတရားကို မထားတတ်တဲ့ သူတွေ နောက်ဆုံး သစ္စာရဲ့ ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို ခံရတယ်ပဲ ဆိုမလား ...
မပြောတတ်တော့ပါဘူး အစ်မရယ် ...
သင်္ကြန်အကြိုဝတ္ထုလေးဖတ်သွားတယ်၊ တော်တော်ရေးတတ်တာပဲ :) Cheers !
ဇာတ်လမ်းလေးက လှတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတယ်။ အရေးအသားသွက်တယ်။ မိန်းကလေးနာမည်လေးတွေက လှပြီးယဉ်သလောက် သူနက်ရောင်ဆိုတဲ့ နာမည်ကျတော့ တစ်ခုခုကိုပဲ ရည်ညွန်းချင်လို့လား.. နာမည်ဆန်းဆန်းပဲ ပေးချင်လို့လားမသိဘူး တမျိုးပဲ။ ပိတောက်ဖူးက အဖြူရောင်နတ်သမီးပါလို့ မပြောထားပေမယ့် နတ်သမီးက ပိတောက်ဖူးနေရာကို ၀င်ပြီးရေးတာတော့ အမှန်ပဲ။ ပိတောက်ဖူးရဲ့ ခံစားချက်တွေထဲမှာ နတ်သမီးရဲ့ ခံစားချက်တွေပေါ်နေတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို အဖြစ်မှန်မဟုတ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ပြောစရာလေးကျန်သွားလို့... ပိတောက်ကိုလည်း ချစ်တယ်။ သင်္ကြန်ကိုလည်း ချစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သင်္ကြန်ကြောင့်နာကျင်ခဲ့ရဖူးတယ် အစ်မရယ်
အဲ့ဒါ လောက ကြီးက ဒဏ်ခတ်တာလို့ ခေါ်လေမလားပဲ...။
ကိုဏီကတော့ သင်းချန်ဆိုတာ မေ့ထားတယ်ဝေ့......း))
နောက်ကျမှ ရောက်လာဒါ... ဆောတီးဘာဘဲ.......း))
လွမ်းစရာ သင်္ကြန်ဇာတ်လမ်းလေးကို လာရောက် ဖတ်၇ှုသွားပါတယ် ...။
သင်္ကြန်ကို ချစ်တဲ့ နှင်း
dသစ္စာဖောက်သူတွေက သစ္စာဖောက်တို့ရဲ့ သွားရာလမ်းကို သွားတာပါ လွမ်းမနေပါနဲ့တော့ ပိတောက်ဖူးရေ..တူသောအကျိုးပေးဆိုတာ အဲလိုမျိုးပေါ့ :))
စာရေးတာ နည်းနည်း Gap ဟ နေတယ်။
1။ ဧပြီ လမှာ မွေးခဲ့တဲ့ သူမကို မြင့်မားသောအရပ်နှင့် ရှည်လျားဖြောင့်စင်းသော ဆံနွယ်တို့ကြောင့် သူမရဲ့ နာမည်ကို ပိတောက်ဖူး လို့ နာမည်ပေးခဲ့တာဆိုရင် နာမည်ပေးတာ အရမ်းနောက်ကျ လွန်းနေတယ်ထင်ပါရဲ့၊ မြန်မာဓလေ့ နာမည်ပေးစနစ်တော့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။
မြင်တာလေးကိုပြောကြည့်တာပါ သူငယ်ချင်း စိတ်မဆိုးရဘူးနော် :)
ဇာတ်လမ်းလေးက ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ ..
အပြင်မှာလည်း တစ်ချို့ ယောင်္ကျားလေးတွေ
ပြောတော့ သူတို့ပဲ ချစ်လိုက်ကြတာ ..
သူတို့ပဲ စပြီး လမ်းခွဲဖို့ လုပ်ကြတယ် ..
မုန်းဖို့ ကောင်းတယ် .. >>>
နဖူးစာမှင်ရည်ကျဲခဲ့ထင်ပါရဲ့...လက်သာရာပါသွားတတ်တာမျိုးနဲ့ တူပါရဲ့လေ..တော်ပါသေးရဲ့ ရ့ပီးမှဆို..ဒွတ်ခ